कैलिनिनग्राद। केन्द्रीय पार्क: निर्माणको इतिहास
कालिनिनग्रादमा, कोइजिङबर्गको इतिहास संग जोडिएको धेरै रोचक स्थानहरू छन्। उनमें से एक - प्योन्टर्स के पूर्व मनोरंजक क्षेत्र 18 वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो एक बार एक बड़े वर्ग से घिरा हुआ था। अब यहाँ Kaliningrad को केन्द्रीय पार्क स्थित छ, पुरानो रूख को हरियाली मा डूबने वाला। यहाँ तपाईं गलीसँगै हिड्न सक्नुहुन्छ, निलो फर्सको साथमा। उमेरका वृद्ध वृक्षहरूको छायामा घुमाउनुहोस्, तपाईंको आत्मालाई आराम गर्नुहोस्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रकृतिको साथमा एक ठूलो आधुनिक शहरको हृदयमा रहनुहोस्।
वर्षको कुनै पनि समयमा कैलिनिनग्राद केन्द्रीय पार्कले तपाईंलाई नयाँ भेटमा भेट्नेछ। गर्मीको मौसममा तातो, असाध्यै वायु, बालबालिकाको शोर र अन्यमा लिपिनेछ, आकर्षणमा सवारी गर्न चाहने, छुट्ट्याउने र छुट्ट्याउने निर्माताहरू। प्रारम्भिक शरद ऋतुले मेपल को नक्काशीदार पातहरु संग रातो क्रिममोन लाई चकित गर्नेछ। जाडोले स्प्रिंग स्पार्कलिंग स्नोडफ्रेटको स्पार्कले दिन्छ, रङमा स्केट्स बजाउँछन्। ब्लाउजिंग स्प्रिंग रोडियाडन्ड्रन र पुरानो रूखहरु को ताजा ग्रीस को संगोष्ठी भव्यता संग आकर्षण हुनेछ।
पार्क आफै, पुरानो जर्मन चर्च, पार्क क्रेक, यसको माध्यमबाट पुल, रानी एलिजाबेथको घुमाउन्ड र रोमान्टिन वनबाट ल्याइएको, चांसलर विल्हेल II को काठको शिकार महलले जनावरबाट संरक्षित गरेको छ। सबैले गर्मीको दिनमा ग्रीष्ममा आइपुगेका केही उदासीय कारणलाई दुःख दिन्छन्, तर सवारी र बच्चाको हँसिलो आवाज तपाईंलाई सम्झन्छ कि जीवनमा जान्छ।
मध्य पार्क 18 औं शताब्दी को अन्त देखि कैलिनिनग्राद मा आफ्नो इतिहास शुरु गर्यो, जब यो एक महान मानिस को भाग थियो। उनको स्कूल सल्लाहकार, के.के. बोल्ल्ट सहित थुप्रै मालिकहरू थिए, जसले शहरको इतिहासमा प्रवेश गरेकी उनको लुईसको सम्मानमा "लुईवीद्वारा चुने" पार्कको नाम दिए। 1809मा, सयौं भन्दा बढी वर्षका लागि मनोरञ्जन प्राइसियन राजाको गर्मीको निवास हुन्छ।
रानी लुइस पार्कमा हिड्न मन पराउँथे। यो पार्कको नामसँग जोडिएको थियो। उनको लागि त्यहाँ सानो काठको घर बनाइएको थियो जसमा उनले उनीहरूको भ्रमणको दौडान बन्द गरे। यहाँ राजा विलियम आई थियो। तथ्य यो कि शहरको निर्माण भइरहेको थियो, रानीको घर पार्क भन्दा बाहिर थियो। सन् 1914 मा विल्हेल्म पार्कले पार्कलाई शहर दिए।
कैलिनिनग्राद सेन्ट्रल पार्क को नजिकै एक पुरानो कब्रिस्तान थियो, जुन तेस्रो अल्स्टर्डट भनिन्छ। यो पार्क सँग एक जटिलमा एकसाथ मर्ज गरिएको थियो। यो महान देशभरी युद्ध पछि भयो।
रानी लुसासा रानी
कैलिनिनग्राद को केन्द्रीय पार्क मा स्थित चर्च को निर्माण, 1901 मा जर्मन वास्तुकार एफ। हेमिमन को परियोजना को अनुसार बनाइयो। दोस्रो विश्वयुद्धको दौडान, भवन भारी मात्रामा क्षतिग्रस्त भएको थियो र यो प्रारम्भिक 60 हरूमा ध्वस्त हुन जानेछ। सोभियत वास्तुकार यू। वैगनो ने शाब्दिक रूपले उनलाई एक कठपुतली थिएटर को एक परियोजना को विकास गरेर उनको बचाव गरे, चर्च को तीव्र भवन को आधार मा।
पुनर्स्थापना पछि, चर्च को उपस्थिति समान थियो, र भित्र यो एक पूर्ण पुन: विकास गरिएको थियो, जो आधुनिक थियेटर को आवश्यकताहरु अनुरूप। पहिलो तल्ला एक प्रदर्शनी कक्ष हो, र दोस्रोमा अडिटरियमहरू छन्। भवन केन्द्रीय पार्क कालिनिनग्राद को आभूषण हो र भूत र वर्तमान बीचको कार्बनिक लिङ्क हो।
पार्कको मुख्य आकर्षण पुरानो रूख दुई सौ वर्ष भन्दा अघि रोपिएका छन्, जो प्राकृतिक र मुख्य सजावट र सजावट हुन्, जुन पार्कको सबै आकर्षण सबै आकर्षणमा देखा पर्दछ।
पुरानो जलाशय गजबो, आधा-राउन्डरले कलिनियरिङ् केन्द्रीय पार्कमा एक अनोखी आकर्षण प्रदान गर्दछ। बर्लिनको फ्रेडरिक द ग्रेटका लागि प्रसिद्ध इज्जत स्मारकको स्मारकको लेखक जर्मन मूर्तिकला के। रूचद्वारा निष्पादित गरिएको छ, क्यान्सग्सबर्गको स्मारक र क्यान्सरबर्गको धेरै स्मारक। एकपटक गैजेबो को रानी लुइस र बृहस्पति बस्ती संग सजाय गरे पछि, तर तिनीहरू अपमानजनक रूपमा गुमाएका छन्।
कालिनिनग्रादको संस्कृति र मनोरञ्जनको केन्द्रीय पार्कमा एक धारा हो जुन प्राचीन पुल फैलिएको छ, अर्को एक ढुङ्गाको सीढ़ी हो जुन पहाडी पुग्छ। यो सबै सँग एक अद्भुत परिदृश्य सिर्जना गर्दछ, जुन पवित्रता र पुरातनता द्वारा फ्यान गरिएको छ।
पार्क मा दुई फव्वारेहरू छन्, जसमध्ये एक बच्चाहरु को लागि विशेष गरीएको छ। यो Peterhof "Shutikha" सम्झाउँछ, जो एक गोपनीय लुप्त टाइलमा लुकेको छ, एक यादृच्छिक क्लिक को साथ, जो एक splashing प्रभाव सिर्जना गर्दछ, जो बच्चाहरु र वयस्कहरू, अविश्वसनीय प्रसन्नतामा ल्याउँछ।
कालिनिनग्रादको संस्कृति र मनोरञ्जनको केन्द्रीय पार्कमा, एक नाम र बारम्बार (Baron) K. Munchhausen, जसको नाम एक घरको नाम बनेको छ, र सबै प्रकारको अविश्वसनीय कथाहरु र फिलीस रूसको बारेमा जालीको अद्भुत कथाकारको लागि खडा हुन्छ। उहाँ धेरै लेखकहरूको पुस्तकको चरित्र बन्नुभयो। यसको बारे मा धेरै कलात्मक र एनिमेटेड चलचित्रहरू गोली मारिएको छ। स्मारक जर्मन शहर बोडेनेभेनका बासिन्दाहरूको उपहार हो जुन तिनीहरूले शहरको सालगिरहको लागि बनाएका थिए।
कैलिनिनग्रादको संस्कृतिको केन्द्रीय पार्कमा स्थापित अर्को स्मारक, प्रसिद्ध सोवियत कवि र अभिनेता वी। विस्ट्सस्कीलाई समर्पित गरिएको छ। केलिनिनग्रादका बासिन्दाहरूले विश्वास गर्छन् कि उनले आफ्नो शहरमा आफ्नो अन्तिम संगीत कार्यक्रम गरे। रूसको हरेक बासिन्दा आफ्नो कविता र गीतहरू जान्दछन्। तिनीहरू सोभियत र रूसी नागरिकहरूको एक भन्दा बढी पुस्ताको गन्ध थियो।
एक जादू मशरूम मा एक साना जंगल परी को सानो स्मारक आकर्षण र दु: ख को द्वारा प्रवेश गरेको छ। यो छुटेको मूर्तिको तहत, यति लामो समयसम्म स्थापना गरिएको छैन, "समय कैप्सूल" छापिएको थियो, जुन 2028 मा खोल्न पर्छ। यो सानो रचनाले कैलिनिनग्राद केन्द्रीय पार्कमा आगन्तुकहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ।
गर्मीको मौसम खोल्नुहोस्
शहरको सालगिरहमा ग्रीष्मकालीन चरण पुनर्स्थापित गरिएको छ र खोलिएको छ, जसमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजित छन्। यहाँ विश्व उत्सव "कैलिनिनग्राद सिटी जैज", विभिन्न संगीतकारहरू, त्यौहारहरू, नृत्य प्रतियोगिताहरू, विषयवस्तु रातहरू छन्।
बच्चाहरु र वयस्क आकर्षणहरु
समय अझै पनि खडा गर्दैन र हाम्रो जीवनमा सबै कुरा परिवर्तन हुँदैछ। पार्कले पनि परिवर्तन गरेको छ। पार्क को कर्मचारीहरु सावधानीपूर्वक साना कोनेहरु लाई अतीत को सम्झना राख्नुहोस, तर पार्क को अधिकांश मनोरंजन र सबै प्रकार को गतिविधिहरु को लागि डिज़ाइन गरिएको छ। आरामदायक आरामदायक कैफे, एक आधुनिक शहरका बच्चाहरु र वयस्कों को आकर्षणहरु छन्। पार्क जस्तै, शहरको बासिन्दा र अतिथिहरु लाई धेरै भन्दा मनपर्छ।
को गोडा को पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस
बनाउँने खमीर बिना गहुँ मा Braga
त्यो गर्भावस्था को समयमा placental lactogen देखाउँछ?
दबाब चिकित्सा उपयोगी छ? समीक्षा र विवरण
यो सबै लाभदायक गुण कायम रहन्छ त कसरी, अदुवा बनाउँने?
प्रतिस्पर्धा। अवधारणा र प्रकारका बारेमा छोटकरीमा
डिजेल बयलर "Kiturami": प्राविधिक विनिर्देशों र समीक्षा
Nizhny Novgorod, Aleksandra Nevskogo गिरजाघर। Nizhny Novgorod: आकर्षण, फोटो
काकेशस पहाड - दन्त्यकथा